China Company News Ukukhiqiza kanye neFektri | Yiwu Shunshui
Abaphenyi baseHarvard University bathole ukuthi abantu abaphumelelayo bavame ukukhombisa ukuthambekela ekungalandeli isiko. Isibonelo, ezweni lokuhweba okunzima, abantu bavame ukugqoka amasokisi akhanyayo.
Ucwaningo olubizwa nge- "Red Sneaker Effect" luhlola ukusabela kwabantu emikhiqizweni engekho ezingeni nokuthi ilolonga kanjani umbono wabo ngemikhiqizo engekho ezingeni, njengabantu abagqoka amateki abomvu ezindaweni zobungcweti.
Kuphetha ukuthi ukungahambelani kuvame ukutolikwa njengokudla okugqamile, uhlobo lwesimo esiphakeme nokuzethemba.
Ucwaningo lwethu luhlola ukuthi ababukeli bezinkampani zangaphandle bakuchaza kanjani lokhu kwephulwa kwezinkambiso ezijwayelekile ngokuya ngesimo namandla okuchazwa. Sifakazela ukuthi ukuziphatha okungafanelekile njengophawu olubizayo futhi olubonakalayo kungasebenza ngokufana nokusetshenziswa okusobala, futhi uma kuqhathaniswa nokuziphatha okufanelekile, kungafakazelwa ukuthi isimo namakhono abanye kuyathuthukiswa.
Ngokuphambene nalokho, abantu abanezinga eliphansi enhlanganweni kungenzeka ukuthi bathobele ngokuqinile ikhodi yokugqoka.
Kuqashwe abantu abadala abangu-109 maphakathi neMilan. Phakathi kwabo, abangama-52 kukhona abasizi bezentengiso ezitolo ezinkulu, abathengisa izinhlobo ezifana no-Armani, uBurberry, uChristian Dior, uLa Perla, uLes Copains noValentino. Abanye ababambiqhaza abangama-57 baqashwa eMilan Central Station futhi babenolwazi oluncane lokusebenza ezitolo.
Ababambiqhaza babuzwa ukuthi bachaze umbono wabo ngomuntu ngokuya ngesimo esibhaliwe sabesifazane abangena ezitolo ezisezingeni eliphezulu. Kwesinye isikhathi, lo wesifazane oqanjiwe wachazwa ngokuthi “wayegqoke ezemidlalo nejakhethi.” Babuzwa imibuzo eminingi ukuthola ukuthi ngabe babecabanga ukuthi lo wesifazane uyikhasimende likanokusho noma le-VIP.
Kuvele ukuthi abasizi basesitolo nabanye besifazane banikeze amamaki aphezulu kwabesifazane abangafanelekile abagqoke ezemidlalo. Kubasizi bezitolo abajwayele indawo yokuthengisa yama-boutique, lo mkhuba unamandla ngokwengeziwe.
Ocwaningweni lwesibili lwale ndatshana, abacwaningi bafunde izingubo ezingezona ezendabuko endaweni esezingeni elifanele.
Kuze kube manje, ababambiqhaza abayi-159 baqashwa eHarvard University eBoston. Baphinde bathola incazelo yemvunulo kanye ne-biography yomuntu ocabangelayo, kulokhu uprofesa waseyunivesithi.
Ngaphezu kwalokho, lapho umuntu egqoka ngokwengeziwe, isimo sabo siyanda. Endaweni yobungcweti, osolwazi abagqoke izikibha esikhundleni samasudi nabo babhekwa njengezinga eliphakeme.
"I-fashion chic" yama-hoodies nama-T-shirts iyikhodi yokugqoka yomkhakha wezobuchwepheshe, ikakhulukazi iSilicon Valley.
Isici sesithathu socwaningo lweHarvard sibheka izinga lokungahambisani ngamabomu ngenhloso yokuzimaka njengabantu abazimele nokuheha ukunakwa.
Emhlabeni wokujola, lokhu kubizwa nge- "Peacock Screening", futhi indlela yayo ekhaliphile ingenziwa ehhovisi.
Ucwaningo luthole ukuthi uma itafula lokugqoka elisezingeni eliphansi emsebenzini lithathwa njengeliphezulu, lithathwa njengenhloso, hhayi ngengozi kuphela.
Abaphenyi baveze ukuthi imikhiqizo ehlangabezana nalesi sidingo isivele ikhona emakethe, njengephakethe lamasokisi angenawo umentshisi.